Mararka waxaa aad muhiim u ah si loo hubiyo in ugu fiican iyo gobolka barnaamijyada farshaxanka waxaa lagu rakibay laakiin la'aan meel aysan suurto gal ka dhan. Sidaa darteed fikradda ah laga guurayo xijaab waa wax caawin lahaa user ee arrintan la xiriira. Waxa kale oo ay ka dhigi lahaa hubiyo in unallocated iyo sidoo kale meel bannaan oo aan la isticmaalin waxaa loo isticmaalaa in la hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah barnaamijyada farshaxanka lagu rakibay aan arin kasta. Tutorial waxaa loo qoray si ay u hubiyaan in user helo natiijada ugu wanaagsan oo aan khasaaro xogta qoruhu waxaa ku biireen iyo user helo ugu fiican oo ka mid ah maqaal qoruhu ku rakiban.
Sidee inay la midowdo qoruhu in Windows 10? e
Waa in la ogaadaa in dhisay functionalities ee Windows 10 ama xataa koob ee hore ee OS in la bilaabay by Microsoft ma ogola user in ay ku milmaan qoruhu ku saabsan iyaga u gaar ah oo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in ugu fiican iyo gobolka of software tahay xisbiga saddexaad waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo wixii kaloo ka dib la samayn karaa si fudud weyn iyo qanacsanaanta sameeyo. Waxaa ka dhigi doonaa oo keliya ma aha hubiyo in maqaal qoruhu waxaa ku biireen laakiin sidoo kale hubin doona in user helo badan oo meel bilaash ah si loo hubiyo in hawlaha la xiriira nidaamka la fuliyaa usii iyo geynta weyn ayaa sidoo kale ku riyaaqay waqti isku mid ah. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in software ah in la doorto in arrintan la xiriira waxaa marka hore baadhay internet-ka si ay u eegista la xiriira ayaa sidoo kale la baadhay, oo user helo software ugu wanaagsan ee la heli karo. Si loo hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka fanka la soo bixi user ayaa sidoo kale loo baahan yahay si loo hubiyo in waafaqid ee barnaamijka ayaa waxaa sidoo kale loo arkaa sida ay tahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee jeer oo dhan. User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in gargaarka AOMEI ah xijaab la doorto sida software sida ay heer sare waxaa lagu talinayaa in arrintan la xiriira. Geedi socodka waa in la raaco arrintan la xiriira sidoo kale waa mid fudud oo user waa in la hubiyo in ugu wanaagsan waxaa laga soo software ah adigoo raacaya taallaabooyinka in la xuso hoos Mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee ay tahay in la tixgeliyo in arrintan la xiriira sameeyo waa xaqiiqda ah in talaabooyinka in la fuliyay isla si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo sababtay in la doonayo oo waa waafaqsan shuruudaha nidaamka. Waxaa sidoo kale in la xuso in user wuxuu hubinayaa in in ugu wanaagsan ee na laga soo saaray version pro in la bixiyo oo waa la heli karaa online si fudud. Geedi socodka waa in la raaco arrintan la xiriira waa sida soo socota oo mar kale user wuxuu la iman doonaa in la ogaado in nidaamka waa dhab sahlan oo ay raacaan:
Laga soo bilaabo URL http://www.disk-partition.com/windows-10/merge-partitions-windows-10-0528.html user ay u baahan tahay inaad kala soo baxdo, soo dajiyo oo ay maamulaan barnaamijka si loo bilaabo nidaamka:
User ayaa markaas u baahan yahay si loo hubiyo in hab-socodka horumarka ay xaq u riixaya drive in ay tahay in la biireen dibna xulashada ku milmaan doorasho Risaalo ka jiraan:
Qoruhu waa ka dibna in la soo xulay oo user ay u baahan tahay in la hubiyo in badhanka OK la isku soo riixayo in ay sii wadi arrintan la xiriira:
Marka samaysay user ay u baahan tahay in ay wax miiran codsan button dhammayn nidaamka Dhameystiran:
Barnaamijyada software caan ah oo ku biirtay qoruhu
Waxaa jira tobanaan kun oo barnaamijyada la heli karo online si ay u hubiyaan in dadka isticmaala waxaa lagu cafiyo arrintan la xiriira. Qaybtan tutorial inay hubiyaan in ay iyaga ka mid ah ugu wanaagsan iyo meesha ugu dambeysa waxa ay ku xusan si aad u hubiso in user helo ugu wanaagsan ee reer arrin ku saabsan ka dhigi doonaa. Waxa kale oo hubin doona in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo wax soo saarka dhamaadka waa in isla user u baahan tahay. Barnaamijyadan waxay sidoo kale u shaqeyn doonaa arrin go'aan ka oo si xaqiiqo ah loo isticmaali doono mustaqbalka haddii user yimaado guud ahaan arrinta la mid ah si ay u xalin iyo user helo natiijada ugu wanaagsan:
Waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay marka ay timaado ah Barzakh, hawlaha la xiriira. Waxay hubin doonaan in user helo ugu wanaagsan ee reer software-ka, laakiin sidoo kale hubin doona in loo isticmaalo waxaa laga dhigay wax sahlan maadaama ay jiraan boqolaal Casharrada online oo loo isticmaali karo si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan ma ahan oo keliya.
Barnaamijka ayaa waxaa lagu qiimeeyay sare sida interface waa soo jiidasho
Feature ugu wanaagsan ee barnaamijka waa swiftness ah oo uu soo gundhig gudahood
Wixii user cusub barnaamijka ma fududa in la isticmaalo oo dhan.
Qalab Mini saaxir xijaab
Barnaamijku waxa uu si gaar ah loogu talagalay si loo hubiyo in ugu fiican iyo gobolka functionalities tahay waxaana lagu soo gudahood oo user helo natiijada ugu fiican ee ku soo laabto. Waxa kale oo hubin doona in loo baahan yahay nidaam iyo DHCP waxaa sidoo kale loo arkaa halka hawsha Risaalo la xiriira waxaa la qabtay oo halkan aysan hoos u dhigi nidaamka.
Barnaamijka wuxuu leeyahay interface ah si fudud u fahmi gacan ka ay guul
Shaqeynta guud ee barnaamijka sidoo kale waa u fududahay in la fahmo lana fuliyo.
Barnaamijku wuxuu hoos nidaamka iyo hawlaha kale ee la wada saameeyey si weyn u kordhin.
Tababaraha xijaab Paragon
Ugu salka barnaamijka been interface ka garaafyada iyo sabab la mid ah waxa ugu fiican ee isticmaala kuwaas oo doonaya in la hubiyo in software in uu leeyahay oo dhan awoodaha Risaalo la xidhiidha waxa lagu xiraa iyo xaq waa qubbad nidaamka.
Barnaamijku waxa uu u qaban karin wax shaqo Risaalo la xiriira user a ka fikiri karaa
Xawaaraha waa ku dhawaad ​​20X dhakhso marka loo eego barnaamijyada kale.
Waxaa jira in badan oo xayeysiis lagu jiro download ah taas oo ka dhigaysa habka buuxa ee ka kaaftoomi.
Sida loo baaqsado xogta marka biirtay qoruhu
Si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-socodka tahay la raacay iyo dhamaado farxad la soco waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in user oo dhan xogta gurmad sida ku biirto ayaa sidoo kale u baahan Risaalo ka tirtiri waa in ay keeni karto in khasaare xog ah gurmad la aanad si fiican u sameeyey.
Maxaa dhacaya haddii gurmad aan loo sameeyey?
Wondershare Data Recovery ku yaal URL http://www.wondershare.com/data-recovery/ waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican in la hubiyo in user helo gobolka ugu fiican iyo barnaamijka dib u soo kabashada xogta tahay in u oggolaan inay u soo ceshano kasta ka dhigi lahaa file hal iyo waxa ugu fiican waa in files karaa in dib looga hor xogta la soo kabsaday si sidan user inay hubiyaan in faylasha dheeraadka ah ee aan soo guuriyeen dhammaan khayraadka nidaamka maaraynta hab ugu fiican ee ka dhigi kara.
> Resource > Ladnaansho > Sidee inay la midowdo qoruhu aan Loss Data in Windows 10?